Love Affair In Gym A Secret Love Story 1.0.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
Love Affair In Gym A Secret Love Story
ဗားရွင္း 1.0.5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Love Affair In Gym A Secret Love Story
Love Affair In Gym A Secret Love Story ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Gym is the perfect place to get the proper fitness tips to keep our body more beautiful & more shining. In this Love Affair In Gym A Secret Love Story game, you enjoy the love story of Reeva who is falling in love during the gym. So get ready to spend the whole time with Reeva and perform tons of fun activities with her. First of all, wake up in the early morning and help her to select the best gym in the city. Before joining the gym, she needs attractive look so visit the makeover section and give her shiny look. After that, go to the gym and start to perform different exercises like cycling, running, spinning, push ups, boxing, weight lifting, jumping rope and more. In this gym love story game, you will find lots of aerobic exercise with plenty of weight loss dancing, aerobics dance workout. At the end, Head to the gym with your love and enjoy some pleasant time with him.
- Pick outacute hairstyle
- Challenge your love partner in arm wrestling
- Eating some healthy food after gym
- Do different prank at the gym
- Click some amazing photos
- Enjoy kissing with your love
- Easy to use controls for kids & girls of all ages
အားကစားရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုပြီးလှပ & ပိုပြီးမထွန်းလင်းဘဲနေကြစောင့်ရှောက်ရန်သင့်လျော်သောကြံ့ခိုင်ရေးအကြံပေးချက်များရရန်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အားကစားရုံတစ်ဦးကလျှို့ဝှက်ချက်သီချင်း Love Story ဂိမ်းထဲမှာဒီမတ်ေတာသ Affair ခုနှစ်တွင်, သင်အားကစားရုံအတွင်းမှာမေတ္တာ၌ကျသွားသူ Reeva ၏မတ်ေတာပုံပြင်ပျော်မွေ့။ ဒီတော့ Reeva နှင့်အတူတပြင်လုံးကိုအချိန်ဖြုန်းနှင့်သူမ၏အတူပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများတန်ချိန်ဖျော်ဖြေဖို့အဆင်သင့်မရ။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာအစောပိုင်းနံနက်ယံ၌ထနိုးနှင့်မြို့ထဲတွင်အကောင်းဆုံးအားကစားရုံကို select မှသူမ၏ကူညီပေးသည်။ အားကစားခန်းမထဲမဝင်ခင်သူမကဒါပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများအပိုင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူမ၏တောက်ပကြည့်ပေးပါဆွဲဆောင်မှုကြည့်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက်အားကစားရုံသွားပြီးအပြေး, စက်ဘီးစီးခြင်းနဲ့တူကွဲပြားခြားနားသောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်မှစတင် spinning, တွန်းအားပေး ups, လက်ဝှေ့, အလေးချိန်ရုတ်သိမ်း, ကြိုးနှင့်ပိုပြီးခုန်။ ဒီအားကစားရုံချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းကိုဂိမ်းထဲမှာသင်ကိုယ်အလေးချိန်ကခုန်, အေရိုးဗစ်အကအခုန်လေ့ကျင့်ခန်းများများနှင့်အတူအေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဆုံးမှာသင်၏မေတ္တာနှင့်အတူအားကစားရုံမှဦးခေါင်းနှင့်သူ၌အချို့သောသာယာသောအချိန်ပျော်မွေ့။
Key ကို Feature ကို:
- တစ်ဦးချစ်စရာဆံပင်အထဲက Pick
- လွယ်ကူအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလေးတွေ & မိန်းကလေးများအဘို့အထိန်းချုပ်မှုသုံးစွဲဖို့
GameiCreate သင်တို့ရှိသမျှသည်အကျယ်လေးတွေချစ်မြတ်နိုးထားတဲ့ဂိမ်းနှင့် apps အများစုချစ်ရသူအမျိုးအစားနောက်ဆုံးပေါ်ဖန်တီးမှုတတ်၏။ ကျနော်တို့ပိုကောင်းပညာရေးဆိုင်ရာအကျွမ်းတဝင်နှင့်လေးတွေများအတွက်ခံစားဘို့ပျော်ရွှင်စရာများနှင့်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးပြုသူဖော်ရွေဂိမ်းများကိုတည်ဆောက်ရန်လုံးဝကျိန် ဆို. ပူဇော်ကြသည်။ GameiCreate ၏နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူနေပါ။
Google ကပေါင်းကိုလိုက်နာပါ: https://plus.google.com/b/111295411965625717633/111295411965625717633
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းဗီဒီယိုများ Watch: https://www.youtube.com/channel/UCtQz5qrQeBQwlNiELfN39mA
ငါတို့သည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။ gameicreate@gmail.com မှာမဆိုမေးခွန်းများနှင့်အကြံပြုချက်များဘို့အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
Love Affair In Gym A Secret Love Story အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Love Affair In Gym A Secret Love Story အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Love Affair In Gym A Secret Love Story အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
indusos စတိုး 7.35k 3.18M
Love Affair In Gym A Secret Love Story ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Love Affair In Gym A Secret Love Story အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.0.5
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://gameicreate.blogspot.com/2017/06/privacy-policy.html
App Name: Love Affair In Gym A Secret Love Story
File Size: 48.42MB
Release date: 2018-08-27 12:31:31
လက်မှတ် SHA1: 19:1C:44:8D:DF:27:20:E1:99:4A:4C:9A:BC:09:36:58:14:4E:D2:24
ထုတ်လုပ်သူ (CN): gameicreate
အဖွဲ့အစည်း (O): aisgameicreate
နယ်မြေ (L): ahm
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): guj
Love Affair In Gym A Secret Love Story APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ